isikhanyeli | Ndlela Best mhlophe Amazinyo Guide
Ulwazi oluqulethwe kule website ngeenjongo ulwazi ngokubanzi kuphela. Le ngcaciso inikwa site yethu xa sizabalazela ukugcina ingcaciso ihlaziyiwe kwaye zichanekile, senza lumelo kwiingcaciso okanye ziqinisekiso zalo naluphi na uhlobo, okanye ezingachazwanga, malunga ukuphelela, ukuchaneka, ukuthembeka, ukufaneleka okanye ubukho ngokuphathelele kwi-website okanye ulwazi, iimveliso, iinkonzo, okanye yemizobo ezinxulumene eziqulethwe kwi website nayiphi na injongo. Thembela wu kuma kwihi ulwazi olunjalo ngoko kuphela kumngcipheko wakho.
Xa kungekho siganeko siza kuba nabutyala ngayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo kubandakanywa ngokungaphandle komlinganiselo, ngqo okanye ilahleko okanye umonakalo, okanye nayiphi na ilahleko okanye umonakalo nokuba evela ukulahleka kwengcaciso okanye ingeniso evela ngaphandle, okanye ngokunxulumene, ukusetyenziswa kwale website.
Ngokusebenzisa le website uyakwazi ukukhonkca kwamanye websites ezo phantsi kolawulo site yethu. Asinayo ulawulo phezu uhlobo, umxholo kunye nokufumaneka kwezo sayithi. Ukuqukwa naziphi amakhonkco akuthethi kuthi isindululo okanye ukungqinela izimvo ngaphakathi kwabo.
Konke okusemandleni ukugcina website phezulu kwaye isebenze kakuhle. nokuba, site yethu kuthatha xanduva, kwaye akayi kuba noxanduva, angafumanekiyo okwethutyana website ngenxa yemiba yobugcisa ezingaphaya kwamandla ethu.